गलत सूचनाले सेयर बजारमा कसरी फस्छन् सोझा लगानीकर्ता ?| Corporate Nepal
गलत सूचनाले सेयर बजारमा कसरी फस्छन् सोझा लगानीकर्ता ?
जेठ २४, २०७८ सोमबार १९:३७
काठमाडौं । पछिल्लो समय सेयर बजारले दैनिक नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । नयाँ उचाईसँगै सेयर बजारमा भित्रिने नयाँ लगानीकर्ता पनि थपिँदै छन्, जसमध्ये कतिलाई यस क्षेत्रको बारेमा सामान्य ज्ञान समेत देखिन्न ।
तर, सेयर बजारबाट धेरैले राम्रो कमाई गरेको देखेर धेरै नयाँ लगानीकर्ता आकर्षिक हुँदै गएका छन् । अहिलेको विषम परिस्थितिमा आफूले दुःख र मेहनत गरेर जम्मा गरेको केही रकम सेयर बजारमा लगानी गर्न पाए केही कमाई हुन्थ्यो कि ? भन्ने आशामा धेरैमा मौलाएको छ । तर नेपालको सेयर बजारमा हुने छदम खेल र नाफाखोरी प्रवृत्तिका कारण सोझा लगानीकर्ता शिकार हुने गरेको देखिएको छ । यस्तै एक पीडित यस समाचारदातासम्म आइपुगे ।
उनी भन्छन्, ‘मैले एनआईसी एसिया लघुवित्तको सेयर किन्ने बेला एउटा मिडियामा प्रकाशित यस कम्पनको वित्तीय विवरण हेरेको थिएँ । सम्वन्धित कम्पनीको वेभसाइटमा विवरण नभेटेपछि मैले सेयर बजारकै न्यूज लेख्ने त्यो वेभसाइट खोल्नुपर्यो । बजारमा नाम सुनेको मिडियाको विश्वास नगर्ने कुरा पनि भएन् । त्यसमा एनआईसी एसिया लघुवित्तको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) १२२ रुपियाँ ७५ पैसा (वार्षिक) देखें । कम्पनी राम्रो लागेर १८८१ मा एक हजार दुई सय कित्ता सेयर किनें । तर, केही समयपछि कम्पनीको तेस्रो त्रैमासिक रिर्पोट कुनै अनलाइन मिडियामा भेटेर हेर्दा थाहा भयो, त्यो कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी जम्मा ३२ रुपियाँ ७५ पैसा रहेछ । अहिले मैले किनेको सेयर मूल्य घट्दै गएको छ । पछि बुझ्दै जाँदा थाहा भयो, केही अनलाइन मिडियाहरू गलत विवरण हालेर लगानीकतालाई झुक्याउने धन्दा गर्दा रहेछन् । सेयर बजारमा कम्पनीको सेयर घटबढ गराउन केही मिडिया लाग्दो रहेछ । मैले त्यो घट्नाबाट धेरै कुरा थाहा पाएँ ।’
यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घट्ना हो । बजारमा भ्रम सिर्जना गरेर सोझा लगानीकर्तालाई फँसाउने र आफू रातारात धनी हुने प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा निकै मौलाएर गएको देखिन्छ । यस्तो धन्दामा केही मिडियासमेत लाग्दा आम लगानीकर्ताको मिडियाप्रतिको विश्वसनियतामा समेत कमी आउन थालेको छ ।
कस्ले नियमन गर्ने ?
सेयर बजारमा लगानीकर्ता आउने पहिलो माध्यम भनेको साधारण सेयर (आईपीओ) हो । त्यसपछि उनीहरू दोस्रो बजारमा आकर्षित हुन थाल्छन् । यसरी सेयर बजारमा आएका नयाँ लगानीकर्तालाई कुन कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो हुन्छ ? कुन कम्पनीको सेयर किन्ने ? विश्लेषण गर्नसक्ने क्षमता तथा शैलीको विकास भइसकेको हुन्न । उनीहरू मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आएका कुरालाई नै विश्वास गर्न बाध्य हुन्छन् ।
नयाँ लगानीकर्ताहरूले मिडियाले राखेको तथ्यांक, सेयर बजारका अगुवाको अन्तरवार्ता तथा प्रतिक्रियाका आधार बजारमा लगानी गर्छन् । तर, मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आउने गलत तथ्यांक र भ्रामक सुचनाका कारण उनीहरू आफू फँसेको थाहै पाउँदैनन् । यस्ता पीडित लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण गरिदिने न राज्य हुन्छ, न लगानीकर्ताका अगुवा र मिडियाले नै उनीहरूको पीडालाई उठाइदिन्छन् ।
अहिलेको सेयर बजारमा वित्तीय अवस्था खराब भएका कम्पनीहरूको सेयर मूल्य पनि उच्च बिन्दुमा पुगेको देखिन्छ । यस्ता कम्पनीले यति प्रतिशत लाभांश दिँदैछ, यति प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्दैछ जस्ता भ्रामक कुराहरू बजारमा फिँजाइन्छ र कम्पनीको सेयर मूल्य घटाउने वा बढाउने काम गरिन्छ । केही समय अगाडि नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस्तो भ्रामक सुचना सम्प्रेषण गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दियो । तर उनीहरू कारवाही गर्ने आँट बोर्डसँग देखिन्न ।
सेयर बजारका बारेमा सामाजिक सञ्जालदेखि केही मिडियामा आउने भ्रामण सुचना नियन्त्रण गर्न लगानीकर्ताका संगठन र अगुवाहरू नै उदासिन देखिन्छन् । मिडियाको तटस्थताको लागि कुनै पनि मिडिया र मिडियाका सञ्चालकले नैतिकरुपमा सेयरको कारोबार गर्न मिल्दैन् । यद्यपि कानुनले यसलाई बन्देज गरेको छैन् । तर सेयर बजारलाई प्रभावित पार्न मिडिया र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो अनधिकृत प्रयोगको मारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ता पर्ने गरेका छन् ।
धेरै लगानीकर्ता मिडियामा राखिएका तथ्यांकको आधारमा लगानी गर्न बाध्य छन् । कम्पनीहरूले आप्नो वेभसाइटमा सबै विवरणहरू नराखिदिँदा पनि उनीहरू गलत सुचनाको भर पर्न बाध्य हुनु परेको छ । यस्ता मिडियाहरूले आफ्नो पक्षमा तथ्यांक राख्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा भए पछि वा कसैको स्वार्थ पूरा गरिदिएपछि त्यस्तो तथ्यांक सच्याउने गरेको लगानीकर्ताको अनुभव छ ।
एक सेयर बजार एक जानकारले उदाहरण दिँदै भने, ‘लुम्बिनी विकास बैंकले आफूसँग भएको डिप्रोक्स लघुवित्तको करिब १० लाख कित्ता सेयर, समता र नाडेप लघुवित्तको सेयर सबै बेच्छ र अर्को वर्ष सतप्रतिशत बोनस सेयर दिन्छ भन्ने हल्लाको कारण सेयर बजार बढेको छ । तर, सम्बन्धित् संस्था कसैले पनि त्यसको बारेमा केही बोलेका छैनन् । एउटा पक्षले आफ्नो फाइदाको लागि हल्ला गरेको छ र अरु साधारण लगानीकर्ताहरू सोही हल्लाकै भरमा लगानी गरिरहेका छन् । यसले उनीहरूको लगानी जोखिममा परेको छ ।’
लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी फस्न नदिन के गर्ने ?
लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न हल्लाको पछि नलागेर आफैले सेयर बजारको बारेमा राम्रोसँग बुझरे मात्र लगानी गर्नु पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । विश्वचर्चित सेयर लगानीकर्ता वारेन वफेटको पनि सेयर बजारसम्बन्धी त्यस्तै बुझाई छ । उनले सेयर बजारमा कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्दा निम्न कुरालाई हेरेर लगानी गर्न सुझाव दिएका छन्ः
१.कम्पनीको व्यापार साधारणतया आफूले बुझिन्छ कि बुझिन्न ?
२.कम्पनीले कस्तो व्यापार व्यवसाय गरिरहेको छ ?
३.भविश्यमा यो कम्पनीको व्यापार व्यवसाय कस्तो होला भनेर अनुमान गर्ने ? व्यापार व्यवस्थापन उचित तवरको छ कि छैन् ?
४.कम्पनीको व्यस्थापन सेयर लगानी गर्नेहरूमैत्री छ कि छैन?
५.कम्पनीले दिने व्यापारको इक्विटी रिर्टन कस्तो छ ?
६.कम्पनी सञ्चालकको आम्दानी कस्तो खालको छ ? कम्पनीको नाफाको मार्जिन कस्तो छ ?
सिभिल बैंकले ३ अर्ब रुपियाँको ऋणपत्र बिक्री गर्ने, बोर्डसँग माग्यो अनुमति
नेस्डो समृद्ध लघुवित्तले आईपीओ निष्कासन गर्ने, अनुमतिका लागि बोर्डमा निवेदन
सेयर बजारमा अस्वाभाविक उतारचढाव, ओरालो लाग्दै आएको नेप्से ७९.४४ अंकले बढ्यो
सर्वोच्चद्धारा ५१ कम्पनीलाई जोखिमयुक्त सुचीमा राख्नुको कारण देखाउन आदेश
हिमालयन बैंकका ग्राहकले दराजबाट सामान किन्दा १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने
आदर्श लघुवित्तको एजीएम असार ३१ गते, आईपीओ निष्काशनको प्रस्ताव पारित गरिने
राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकमा कवि पाठक दोहोरिए
सिम्रिकमार्फत दुई सय कोरोनाका विरामीको उद्धार
महालक्ष्मीले शुरु गर्यो मिस्ड कल सेवा, अब घरमै बसेर बैंकिङ सेवा पाइने